Rumeynta Ilaahay | Tixraaca Fudud Ee Muslimka
Bogga hore/Qeybaha/Iimaanka Muslimka/Rumeynta Ilaahay
Macnaha rumeynta Allaah Cazza Wajalla
waa in la rumeeyo rumeyn dhan oo shaki ku jirin jiritaanka Allaah Kor ahaaye, oo la qiro Rabbinnimadisa iyo Ilaahnimadiisa iyo magacyadiisa iyo tilmaamahiisa,
Waxaanuna uga hadli doonnaa arrimahan afarta si faahfaahsan sida soo socota:
Rumeynta jiritaanka Allaah Kor ahaaye
Qiritaanka jiritaanka Allaah waa arrin abuuris ah xagga dadka uma baahna u raadraadin caddeyn iyo daliil, sidaas awgeed way qirsan yihiin dadku badankiisu jiritaanka Allaah si kasta oo ay u kala duwan yihiin diimahooda iyo madaahibtooda.
Sidaas darteed waxaan innagu ka dareemnaa hoos gudaha quluubtayada inuu jiro Allaah, waxaan magan galnaa waqtiyada dhibaatooyinka iyo shiddooyinka, abuuristeenna rumeysan darteed, iyo dabeecadda diimeed uu Allaah ku rakibay nafta qof waliba, inkastoo ay isku dayaan dadka qaarki inay tiraan ama is moogeysiiyaan.
Haahoo waa innaga maqalna oo aragna ajiibidda uu ajiibo kuwa barya oo wax siiyo kuwa wax weydiista, oo aqbalo ducada kuwa u dhib iyo dan sheegta, arrinkaasoo caddeynaya caddayn la hubo jiritaanka Allaah Kor ahaaye.
Caddeymaha jiritaanka Allaah waa wax iska muuqda aan u baahnayn in la xuso iyo in la tiro koobo, waxaana ka mid ah:
Wuxuu qof walba ogsoon yahay in wax kastoo jira leeyahay cid ahaysiiyey oo ka dambeysa jiritaankiisa, uunankan badan
Ee aan aragno goor waliba waxaan shaki ku jirin inay leeyihiin abuure ahaysiiyey, waana Allaah Cazza Wajalla, waayo suura gal ma aha inay jiraan abuure la’aan abuuray, sidoo kale suura gal ma aha inay iyagu iskood isu abuureen, waayo waxna iskood isuma abuuran. Sida uu Allaah Kor ahaaye yiri:
(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُون)(الطور: 35)
“Mise ma waxaa laga abuuray cid la’, mise iyagaa ah abuurayaasha”? (Ad-Duur: 35)
Macnaha Aayadduna waxaa weeye lama abuurin iyaga abuure la’aan, mana aha iyaga kuwa abuuray nafahooda, markaa waxaa halkaa ka cad inuu yahay abuurahooda Allaah Kor ahaaye.
Habsimada uunkan u socdo marka la eego samadiisa iyo arladiisa iyo xiddigahiisa iyo geedahiisa wuxuu daliil cad u yahay in kownkani leeyahay Abuure Mid Keliya ah, waana Allaah Subxaanahu watacaalaa:
(صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْء)(النمل: 88).
“Waa farsamada Ilaahay ee u sameeyey wax walba si hagaagsan”. (An-Namal: 88)
Marka xiddigaha waaweyn iyo kuwo yar yar– tusaale ahaan – waxay ku socdaan hab sugan aan cillad gelin, xiddig walbaa wuxuu ku socdaa garangar uusan ka gudbin oo xadkiisa ma dhaafo.
Allaah Kor ahaaye Wuxuu yiri:
(لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون)(يس: 40).
“Looma oggola (ma suurowdo) qorraxda inay haleesho dayaxa, habeenkuna ma ka hormi karo maalinta. Oo dhammaan waxay ku dabaashaan mareeg (garangar) dhexdi”. (Yaa siin: 40)
Rumeynta inuu Allaah Kor ahaaye yahay Rabbiga Runta ah:
Macnaha rumeynta inuu Allaah Kor ahaaye yahay Rabbiga uunka oo dhan:
Waa inaad qirto oo rumeyso rumeyn adag aan shaki ku jirin inuu Allaah Kor ahaaye yahay Rabbiga wax walba, ee iska leh oo abuuray oo irsaaqa, iyo inuu Isagu yahay kan wax nooleeya waxna dhinsiiysa, kan wax tara, waxna wax yeelleeya, kaasoo iska leh amarka oo dhan, oo Gacantiisa uu ku jiro kheyr oo dham waana isaga Kan wax walba Kara ee awood buuxda ku dul leh, mana laha cid la wadaagta arrimahaa oo dhan oo saameys ku leh iyo wax ku darsi oo shariik la ah.
Marka waa Allaah oo lagu keli iyo gaar yeelo falalkiisa, arrinkaasina waa inuu qofku rumeysan yahay:
Inuu Allaah Keligi yahay abuuraha wax kasta oo jira uunka, mana leh abuure kale aan Isaga ahayn, sida uu Allaah Kor ahaaye yiri:
}اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء)(الزمر: 62).
“Allaah waa abuuraha wax walba”. (Az-Zumar: 62)
Ma xaggase sancada dadka waa ka beddelid tilmaantii uu lahaa iyo siin tilmaan kale, ama isu soo ururin ama isku rakkibid, iwm. Oo ma aha abuuris dhab ah, ama ka ahaysiin wax meel cidla’ ah iyo waxaan jirin, ama soo nooleyn dhimasho kaddib.
iyo inuu Isagu yahay kan irsaaqa dhammaan uunanka jira mana jiro irzaaqe kale aan Isaga ahayn, sida uu Allaah kor ahaaye yiri:
(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا)(هود: 6)
“Oo ma jiro noole ku sugan dhulka korkiisa oo aysan Allaah irsaaqaddiisu saarnayn”. (Huud: 6)
Iyo inuu (Allaah) Isagu yahay Kan iska leh wax kasta oo jira, oo ma jiro cid u leh si xaqiiqo ah aan Isaga ahayn, sida uu Allaah Kor ahaaye:
(لِلهِ مُلْكُ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِن)(المائدة: 120).
“Allaah baa iska leh mulkiga samooyinka iyo arlada iyo waxa gudahooda ahba”. (Al-Maa’idah: 120)
Iyo inuu Isagu yahay kan agaasima ee maamula ee isku dubbarida wax waliba,, mana laha isku dubbaride kale aan ahayn Allaah, Sida uu Allaah Kor ahaaye yiri:
(يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْض)(السجدة: 5).
“Wuxuu agaasimaa oo isku dubbaridaa arrin (kasta) ee ka jira samada ilaa arlada”. (As-Sajdah: 5)
Ma xaggase maamulka qofka uu maamulo arrimahiisa iyo noloshiisa iyo sida uu isugu dubbarido waa wax ku kooban oo ku eg waxa ku hoos jira gacantiisa iyo waxa uu leeyahay oo awoodo, waxaana suura gal ah inuu miro dhaliyo isku dubbaridkaas, waxaana dhici kara inuu fashilmo, laakiinse maamulka iyo isku dabbiridka Abuuraha Subxaanahu watacaalaa waa mid guud ahaaneed aan waxna ka bixin, oo hirgala aan cidna celin karin mana jiraan wax ka hor iman kara, sida uu Allaah Kor ahaaye yiri:
(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِين)(الأعراف: 54).
“Hubaal Isagaa leh abuurista iyo amarkaba. Waxaa khayr iyo barako badan Allaah, Rabbiga uunanka oo idil”. (Al-Acraaf: 54)
Mushrikiintii Carbeed ee jiray waagii Rasuulka Ilaahay way qirsanaayeen inuu Allaah Kor ahaaye yahay Rabbiga uunka:
Waxay qirsanaayeen gaaladii jirtay waqtigii Rasuulka Ilaahay  inuu Allaah yahay Abuuraha iyo kan iska leh ee maamulka uunka, arrinkaasi keliya ay aaminsanaayeenna looma arkin kuwo sidaas ku soo galay Islaamka, sida uu Allaah Kor ahaaye yiri:
(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله)(لقمان: 25)
“Oo haddaad weydiiso: Yaa abuuray samooyinka iyo arlada? Waxay hubaal oran doonaan: Allaah”. (Luqmaan: 25)
Maxaa yeelay qofkii qira inuu Allaah yahay Rabbiga uunanka iyo kan iska leh iyo kan ku barbaariyey nicmaddiisa: waxaa saaran inuu u keli yeelo Allaah cibaadada oo Isaga keliya Xaggiisa u jeediyo cibaadada isagoo aan cidna wax kala wadaajin.
Marka sidee bay u noqon kartaa caqli gal inuu qofku qiro inuu Allaah yahay abuuraha wax walba oo jira iyo kan isku dubbirida uunka oo maamula ee wax nooleeya waxna dhinsiiya, oo haddana u jeedsha wax ka mid ah noocyada cibaadada cid kale oo qeyrki ah oo wax ka siiya? Kani waa gef kan u xun iyo denbi kan weyn iyo gar darro cad, sidaas awgeed Luqmaan wuxuu ku yiri wiilkiisa isagoo waaninaya oo talo siinaya:
(يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم)(لقمان: 13)
“Wiilkaygiyow! Ha u shariig yeelin waxbana Allaah. Hubaal shirkigu waa gef aad u Weyn.” (Luqmaan: 13)
oo markii la weydiiyey Rasuulkii Ilaahay : Denbi kaa bee u weyn Allaah agtii? Wuxuu yiri: Inaad u yeesho dhig Allaah isagoo ku abuuray” (Al-Bukhaari 4207, Muslim 86).
Rumeynta inuu Allaah yahay Rabbiga Runta ah waxaa ku xasila oo dega quluubta:
Hadduu ogaado addoonka ogaal uu yaqiinsan yahay inayan dhici karin in mid ka mid ah uunanka inuu ka baxo awoodda Ilaahay, oo Isagu yahay abuurahooda iyagoo dhan, iyo in wax kasta oo ka soo hara Allaah la abuure yahay, yahay faqiir u baahan Allaah Kor ahaaye ee ah Kan abuuray, iyo in arrinka oo idil uu ku jiro gacantiisa Subxaanahu, uusan jirin axad wax siiya aan Isaga ahayn, oo jirin axad kale oo maamula uunkan Isaga Keliya ma ahee, mana ay ku dhaqaaqaan waxna haba u yaraadaan sida saxarka ama quraanyada amarkiisa la’aanti, oo kuma xasisho mid kale waxaan amarkiisa ahayn, wuxuu arrinkaasi dhaxalsiiyaa qalbigiisa inuu ku xirmo Allaah Keliya oo wax weydiisto oo u sheegto baahidiisa iyo inuu ugu tiirsanaado Isaga dhammaan arrimaha noloshiisa, markaasuu ku qaabilaa nolosha degganaan iyo dadaal, oo kaga hor tagaa isbeddelada nolosha si deggan oo go’aan adeyg leh iyo adkeysi, waayo maadaama uu la yimid asbaabta si uu u helo waxa uu doonayo arrimaha noloshiisa oo Allaah ka baryey inuu u sahlo muraadkiisa, markaa waa uu gutay wixii saarnaa, markaasaa waxay ka gaabsataa naftiisu inay milicsato waxa ku jira gacmaha dadka kale, waayo arrinku xaqiiq ahaan wuxuu ku jira gebigiba gacanta Ilaahay, wuxuu abuuraa wuxuu doono, oo doortaa.